funny – Phoe Wa
အဆုံးထိ ကွညျ့နိုငျတဲ့သူကို ဒျေါလာ ၂၀၀၀၀ ခြီးမွှငျ့မယျ့ သရဲအိမျ
By Phoe WaPosted on October 31, 2019
Houston မှာရှိတဲ့ သရဲအိမျရဲ့ပိုငျရှငျဖွဈသူ Russ ဟာ ဒီသရဲအိမျကိုအဆုံးထိသှားနိုငျသူကို ဒျေါလာ၂သောငျးပေးမယျလို့ ကွညောထားပါတယျ။ဒီသရဲအိမျထဲကို ဝငျဖို့အတှကျ လိုအပျခကျြလေးတှရှေိပါသေးတယျ။ အဲ့တာတှကေတော့အသကျ၂၁နဲ့ အထကျရှိရပါမယျ။ ၁၈ကနေ ၂၀အတှငျးဆို အုပျထိနျးသူရဲ့ခှငျ့ပွုခကျြလို့ပါတယျ။ ကိုယျခန်ဓာသာမက စိတျကနျြးမာရေးပါ ကောငျးမှနျကွောငျး ဆရာဝနျထောကျခံစာ၊ဆေးဝါးအသုံးပွုထားခွငျးမရှိကွောငျး စဈဆေးခကျြ၊ […]
By Phoe WaPosted on July 31, 2019 July 31, 2019
သတင်းထူးဗျိုး မိန်းကလေး တစ်ဦး မောင်းနှင်လာသော ဆိုင်ကယ် တစ်စီး အရှိန်လွန်ပြီး လမ်းဘေး ထိုးကြကာ တိမ်းမှောက်ခဲ့ကြောင်း ….. ထို တိမ်းမှောက်သူ မိန်းကလေး ယခုအခါတွင် အန္တရယ်ကင်းရှင်းကာ မစိုးရိမ်ရ …. သို့သော် ထိုရဲမှ […]
မြင့်မြတ်နဲ့ ရုပ်ရှင်အတူတူရိုက်ဖို့ရင်ခုန်နေတဲ့ ထိုင်းအလှမယ် Sun Sun
Sun Sun ဟာဆိုရင် မြန်မာပရိသတ်တွေနဲ့ နာမည်မရင်းနှီးရင်တောင်လူကို ရင်းနှီးပြီးဖြစ်နေမယ့် အလှမယ်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ Facebook တစ်ခွင်မှာ လူသိများကျော်ကြားအောင်မြင်လာတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ အလှမယ် Sun Sun တစ်ယောက်ဟာ အခုဆိုရင်တော့ အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Sun Sun က […]
ပါးစပ်မပိတ်အောင်ရယ်ရမယ့် သောက်တလွဲအလုပ်နိုင်ဆုံး ဖြစ်ရပ်များ
By Phoe WaPosted on July 30, 2019 July 30, 2019
ဘဝရဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေကို ရယ်စရာ ဟာသတွေဖတ် ပုံတွေကြည့်ပြီး ကျနော်တို့ ပျော်ပျော်ရွှင်ဖြတ်သန်းဖူးကြပါလိမ့်မယ် ။ အဲဒီဖြတ်သန်းမှုတွေဟာ ကျနော်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမြင်နေရတဲ့ ဖြတ်သန်းမှုတွေထဲမှာ မြင်ရတဲ့ အလွဲတွေ လည်းပါပါတယ်။ ဘယ်အရာတွေ ဟာဘယ်လောက်ပဲ မွန်းကျပ်နေပါစေဦး ဟာသဥာဏ်ရှိတဲ့သူတွေ ဘဝကို ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ […]
စားပြီးတာနဲ့ တစ်ခါတည်း ‘ပါ’လို့ရမယ့် စားပါဆိုင်လေး
By Phoe WaPosted on July 28, 2019 July 28, 2019
ကြုံဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။ အစားစားနေရင်းတန်းလန်းနဲ့ အိမ်သာတက်ချင်လာသလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ စားလက်စကိုထားခဲ့ပြီး၊ အိမ်သာပြေးတက်ခဲ့တဲ့သူတွေ။ ဒီအခက်အခဲက တော်တော်လေးဆိုးပါတယ်။ စားနေရင်း ဗိုက်ရစ်လာတာဆိုတော့လေ။ အခုပြောပြမယ့်ဆိုင်လေးက အဲဒီအကြောင်းပါ။ တကယ်တမ်းက သူကစားနေရင်းတန်းလန်းနဲ့ ပါလို့ရတဲ့ဆိုင်လေးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်သာခွက်ပုံစံထိုင်ခုံတွေနဲ့ ဆိုင်ကိုအလှဆင်ထားပြီး၊ ဆိုင်တောက်လျှောက်ကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဘိုထိုင်အိမ်သာရောင်းတဲ့ […]
ပျင်းပေမယ့် မဖျင်းတဲ့ ဥာဏ်ကြီးရှင်တွေရဲ့ ဖြေရှင်းချက်များ
ပျင်းတဲ့သူတွေဟာ သူများတွေထက်ပိုပြီး အလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ရှာတွေ့လေ့ ရှိပါတယ်။ ပျင်းပေမယ့်လည်း ဥာဏ်ကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်တွေထဲက တစ်ချို့ကို ပြောချင်လွန်းလို့ တို့လည်း အတုယူနိုင်ဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါရစေနော်။၁. ဘယ်သူမှ အငြင်းပွားစရာမလိုတဲ့ တန်းစီနည်းလေးပါ။ လူလည်း တစ်ချိန်လုံး တိုးဝှေ့မတ်တပ်ရပ်မနေရတော့ […]
ဖဲကစားရင်း အရယ်လွန်ပြီး မေးရိုးပါလွဲသွားတဲ့ အမျိုးသမီး
By Phoe WaPosted on July 9, 2019 July 9, 2019
တရုတ်နိုင်ငံနေ စုံတွဲတစ်တွဲဟာ နန်နင်းမြို့ကနေ ရှန်တုံးပြည်နယ်ဘက်ဆီ ရထားစီးပြီး ခရီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ (၂၈) နာရီကြာမြင့်တဲ့ ခရီးစဉ်ဖြစ်တာကြောင့် အဆိုပါစုံတွဲဟာ ပျင်းပျင်းနဲ့ ဖဲဆော့ဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ (၂၀၁၅)ခုနှစ် စက်တင်ဘာလထဲတုန်းက ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ… ဒါပေမယ့် ဘာအန္တရာယ်မှ မရှိတဲ့ဂိမ်းဟာ […]
ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့မို့ မလုပ်ပါနဲ့ပြောတာကို တားမရ၍ မခံနိုင်တဲ့အဆုံး ရပ်ကွက်ရုံး တိုင်ကြားခဲ့ရတဲ့ အဖြစ် :'(
By Phoe WaPosted on July 7, 2019 July 7, 2019
“မရဘူး….ရှင့်ကို ရာအိမ်မှူးနဲ့ကို တိုင်မှာ….” “မိန်းမကလည်းကွာ….ငါက ချစ်လို့စတာကို…. လာပါ….ပြန်ရအောင်….” “မပြန်ဘူး….မပြန်ဘူး….ရှင့်ကို တိုင်ကိုတိုင်မှာ…. အဲဒါမှ ရှင် နောက်မလုပ်ရဲမှာ….” ရုံးရှေ့က ဆူဆူညံညံ အသံတွေကြောင့် ဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီး ထွက်ကြည့်မိတော့ မျိုးချစ်နဲ့ သူ့မိန်းမ ပေါက်ကြီး… […]
ပက်ကျိတစ်ကောင်ကြောင့် ရထားစီးခရီးသည် တစ်သောင်းနှစ်ထောင်နှောင့်နှေး
By Phoe WaPosted on June 26, 2019 June 26, 2019
ရထားပေါင်း ဒါဇင်များစွာ ရပ်ထားရပြီး ခရီးသည် တစ်သောင်းနှစ်ထောင် ခရီးဖင့်ခဲ့ရတဲ့ ဂျပန်က မီးပြတ်မှုကြီးကို ဖြစ်စေခဲ့တာကတော့ ပက်ကျိတစ်ကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ ဂျပန်က ရထားပြေးဆွဲတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုက ဆိုပါတယ်။ ရထားပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ ကျူရှူးက ပြေးဆွဲပေးနေတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဒေသရထားလမ်းကြောင်းတချို့မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား […]
သမီးလေး မင်္ဂလာဦးည ဘယ်လိုဖြစ်လဲ အမေ့ကို ပြောပြ
By Phoe WaPosted on June 20, 2019 June 20, 2019
သမီးဖြစ်သူရဲ့ မင်္ဂလာဦးည ဖြတ်သန်းပုံကို အမေဖြစ်သူ ကြားပြီး သတိလစ်သွားရတဲ့ အဖြစ် သမီးဖြစ်သူ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအပြီး အမေဖြစ်သူက “ သမီး မင်္ဂလာဦးည ဘယ်လိုဖြစ်လဲ အမေ့ကို ပြောပြ ပြောရမှာ ရှက်ရင် စကားဝှက်သုံးပြီး စာပို့လိုက် […]